Magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland ayaa saakay waxaa laga dareemayaa baaritaano Amniga, kadib markii dhowr bam gacmeed xalay lagu tuuray bar koontarool oo sababtay dhimasho & dhaawac.
Xalay Magaalada Kismaayo gaar ahaan Isgoyska Xaaji Jaamac Bam gacmeed ayaa lagu tuuray bar koontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada nabadsugida, habeen kale kahor, bam gacmeed ayaa lagu tuuray bar kale oo isbaaro, halka mas’uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo guryaha ay dagan yiihin la weraray todobaadyadii la soo dhaafay.
Howlgalka saaka ayaa xadeeyay dhaqdhaqaaqa dadka ee xaafadaha ay ka howlgalayeen, waxaana lagu soo aruuriyay dhalinyarada la qabtay ee looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ama xiriir la leeyihiin Al-Shabaab.
Wixii ka dambeeyay Bishii Luulyo 2019 Ammaanka magaalada Kismaayo ayaa faraha ka baxay, qaraxyo iyo weeraro dad badan lagu dilay ayaa ka dhacay xarunta KMG ee maamulka Jubbaland, taasi oo keentay in ciidamo la geeyo goobaha ay ka taliyaan.
Weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen Hotelka Madiina sanadkii 2019-kii wuxuu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray saraakiil iyo dad caan ah oo uu ka mid ahaa AUN Hodan Naaleeye, Ninkeeda Fariid Jaamac Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha DG Jubbaland sanadkii 2016 & shaqsiyaad kale.
11-kii Sebtember 2020, qarax ismiidaamin ah ayaa lagu dilay Guddoomiyihii Rugta Ganacsiga Jubbaland. Shaafi Raabi Kaahin, Hogaamiye Axmed Madoobe kula kulmay saraakiisha amniga magaalada Kismaayo